नेम्वाङको गुनासो : ‘मैले संविधान बनाउन भूमिका खेलेँ अब मेरो भूमिका के ? — Motivate News
नेम्वाङको गुनासो : ‘मैले संविधान बनाउन भूमिका खेलेँ अब मेरो भूमिका के ?
काठमाडौं – स्थायी समिति बैठकमा दोहोरो कोणबाट तर्क आइरहेको वेला सुवास नेम्वाङले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पनि दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनको भनाइ थियो, ‘मैले संविधान बनाउन भूमिका खेलेँ ।
त्यसका लागि कैयनपटक जोखिम मोलेँ । बाहिरका कतिले ‘फादर अफ दी कन्सिच्युसन’ भन्दै जस पनि दिए तर अब मेरो भूमिका के हो ?
के मेरो मृत्युपछि मात्र सुवास नेम्वाङले संविधान बनाउन भूमिका खेल्यो भन्दै सम्झिनुहुन्छ ? बैठकले निर्णय गरोस् ।
तपाईंहरूलाई छलफल गर्न अफठ्यारो हुन्छ भने म बरु बैठकबाहिर गइदिन्छु, निर्णयका लागि सजिलो होस् ।
तर, मैले जति योगदान गरेँ, त्यसलाई पार्टीले ‘प्रोपर्टी’ का रूपमा पुँजीकृत गर्ने कि नगर्ने ?’ तर, उनको विषयमा थप छलफल भएन ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।